Euro Rori Simulator 2: Gungwa Dema ndiko kuwedzera kutsva | Linux Vakapindwa muropa
Euro Rori Simulator 2: Gungwa Dema ndiko kuwedzera kutsva
Euro Rori Simulator inozivikanwa rori kutyaira simulation vhidhiyo mutambo. Iyo ndiyo yakanakisa rori simulator iripo uye iri zvakare yeiyo Linux chikuva, saka vese vashandisi veGNU / Linux migove vanogona kuinakidzwa mune ayo ese mavhezheni uye neyayo ese ekuwedzera. Ndicho chaizvo chimwe chekuwedzeredza icho chinotinetsa, uye ndizvo Euro Rori Simulator 2 Gungwa Dema zvaziviswa.
Uku kuwedzera kutsva kunowedzera nhau uye zvimwe zvirimo kune yepasi vhidhiyo mutambo nekuda kwekuedza kwakaitwa neanogadzira SCS-Software. Ichave iripo pane Steam gore rino, saka isu tinogona chete kumirira kuti tione patinogona kunakidzwa nayo. Kuwedzeredzwa kwakati wandei kwakatoburitswa, sezvo iwe uchizoziva kana iwe uchitevera iyi blog kazhinji, uye ese iwo aunza zvinonakidza zvemukati, kunyanya mamepu matsva kutyaira kuburikidza.
Iye zvino a mepu nyowani yeRomania, saka unogona kutyaira mumigwagwa yedunhu reTransylvania. Pachavewo nedzimwe nyika senge idzo dzakange dzatovepo kana Bulgaria nemigwagwa inoenda ichitevedza mahombekombe, dunhu reTurkey reTrakya, nezvimwe. Nenzira iyi, vatyairi vemarori vanozokwanisa kutyaira kuburikidza nemamepu matsva akawanda kupfuura mamamepu akakura aripo. Unogona kuona rumwe ruzivo muvhidhiyo iyi ne Nyowani Gungwa Dema tirera.
Nenyika idzi nyowani dzakawedzerwa iwe unogona basa kutakura zvinhu kwemaindasitiri akadai sekuchera, makambani ekugadzirisa zvinhu, kurima, nezvimwe Zvese apo uchinakidzwa nekutyaira kuburikidza nemamiriro ezvinhu chaiwo mukondinendi yeEurope, kutyaira marori ari zvakare akakwenenzverwa zvakanyanya uye zvakadzama kubva kune anozivikanwa mabhurani aripo izvozvi. Uye kana zvese zvikafamba mushe, SCS Software inoronga kusvika imwe nguva mukupera kwegore rino, asi hapana zuva rakarongwa parizvino.
Pre-kutenga pane Steam
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Euro Rori Simulator 2: Gungwa Dema ndiko kuwedzera kutsva
Ricardo Zavala akadaro
Pane imwe nguva yasvika kuSpain, TODZIDZA ZVINHU ZVIMWE NYIKA ZVIRI KUENDA KUPINDA MAP?
Pindura Ricardo zavala
Vivaldi 2.5 vhezheni itsva yakaburitswa naRazer Chroma uye nezvimwe
Nvidia 430.14 Linux Mutyairi ikozvino yawanikwa nenhau dzakanaka dzevatambi